काँग्रेस सांसदकाे सरकारलाई ठाडाे चुनाैती : हिम्मत छ भने कश्मीर समस्याबारे बोलोस् -
६ भाद्र २०७६, शुक्रबार १७:०६ 157 पटक हेरिएको
काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तराष्टिय स्तरकाे विषयमा पनि प्रतिक्रिया माग गरेका छन्।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले छिमेकी मुलुक भारतको कश्मीरको समस्यादेखि बाजुरा लगायत क्षेत्रका जोखिम बस्तीको स्थानान्तरणबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिक्रिया माग गरेका हुन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले कश्मीर समस्याबारे सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। छिमेकी मुलुकहरुले आ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला नेपाल मौन बस्नु सफल कुटनीति नहुने भन्दै उनले राष्ट्रिय सहमतिका साथ यसबारे सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
उनले भने, ‘नजिकबाट नियाल्दै छौं, हामी भनेर परराष्टमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। यो नियाल्ने काम कहिले सम्म हुन्छ। कहिलेसम्म नियाली राख्ने? आँट छ भने यो सरकारले बोलोस्। के बोल्छ बोलोस् अनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छ।’ उनले भने, ‘नजिकबाट नियाल्दै छौं, हामी भनेर परराष्टमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। यो नियाल्ने काम कहिले सम्म हुन्छ। कहिलेसम्म नियाली राख्ने? आँट छ भने यो सरकारले बोलोस्। के बोल्छ बोलोस् अनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छ।’
उनले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले आफ्नो चासोका विषयमा अडानका साथ प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाए। १९५० को सन्धिका बारेमा नेपालले आफ्ना कुराहरु राख्न नसकेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। सांसद देवले भने, ‘ब्याक टु मंगलमान भयो। घुमिफिरी रुम्जाटार भयो।’ २०४८ साल मै उठेको विषयमा अहिले पनि अगाडि नबढेर आवश्यक रोडम्याप बनाउन दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिएको निर्देशनलाई उपलब्धि मान्न नसकिने तर्क उनले गरे। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आइतबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको छ।